admin – Khabaarpati
September 27, 2021 adminLeaveaComment on जब एयर होस्टेजले रुँदै भने, ‘तपाईहरूलाई बँचाउन सक्दो कोसिस गर्छौं, इन्धन सकेर धावनमार्गमा फम राखेर ल्याण्ड गराउँछौं’
सोमबार बिहान सवा ८ बजे बुद्ध एयरको विमान ७३ जना यात्रु लिएर विराटनगरका लागि उड्यो । करिब एक घण्टा उडान समय रहेको विमान विराटनगरको आकाशमा निर्धारित समयमा पुग्यो पनि । जब पायलटले अवतरण गर्नअुघि ल्याण्डिङ गेयर झार्न खोजे, ल्याण्डिङ गेयर झरेन । समस्या देखियो । विमानले ७–८ पटक विराटनगरको आकाशमाथि फन्को मारिरह्यो । क्याप्टेन एजी […]
September 27, 2021 adminLeaveaComment on बिमान जब लेन्डिंङ गर्न सकेन भन्ने सूचना पाएका यात्रुले त्यो पल सुनाउंदै यसो भने (भिडियो सहित)
काठमाडौ । आज (सोमबार) बिहान काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७३ यात्रु लिएर बुद्ध एयरको जहाज विराटनगरका लागि उड्यो। तर ल्यान्डिङ गियर (अवतरण गर्ने प्रविधि) मा समस्या आएपछि जहाज त्यहाँ अवतरण हुन सकेन। जसले गर्दा जहाज पुनः काठमाडौं नै फर्कियो। तर समस्या उही– अवतरण हुन सकेन। जसले गर्दा जहाज केही समय काठमाडौंकै आकाशमा घुमिरह्यो। सोमबार बिहान […]
September 27, 2021 adminLeaveaComment on पोखरा उडेको बुद्ध एयरको बिमानमा धुवाँ देखिएपछि काठमाडौं फिर्ता
काठमाडौं । ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि सोमबार बुद्ध एयरकै अर्को जहाज आजै काठमाडौं फिर्ता भएको छ । काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यू ६०१–९ एनएजेओ जहाज पोखरा नपुगी काठमाडौं फिर्ता भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ । जहाजमा देखिएको समस्या समाधान गरी सो जहाज पुनः पोखरा गएको छ । ‘ककपिटमा स्मोक देखिएपछि जहाज फिर्ता भएको थियो ।‘समस्या […]
September 27, 2021 adminLeaveaComment on फेरी घट्यो दैलेखमा अर्को घटना : विवाह गर्ने कुरामा विवाद भएपछि दैलेखकी अस्मिताको ह’त्या
काठमाडौ । दाहसंस्कार भएपछि पहिचान खुलेकी युवतीको घटना विवाहको विवादका कारण भएको खुलेको छ । गुराँस गाउँपालिका(५ गोगनपानीको भैरीखोलामा भदौ १५ गते फेला परेको युवती २२ वर्षीया अस्मिता बोगटी भएको खुलेको छ । तीजमा घर आउँछु भनेकी छोरी घर नआएपछि उनको खोजी थालिएको थियो । नारायण नगरपालिका(१० भवानीकी २२ वर्षीया अस्मिता बोगटी घरेलु कामदारका रुपमा […]
७७ जनाको ज्यान बचाएर बिमान बाहिर आउँदा क्याप्टेनको यसरि भयो विमानस्थलमै स्वागत (हेर्नुहोस भिडियो)
September 27, 2021 adminLeaveaComment on ७७ जनाको ज्यान बचाएर बिमान बाहिर आउँदा क्याप्टेनको यसरि भयो विमानस्थलमै स्वागत (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज ल्याण्ड हुन नसकेर पुनः काठमाडौं नै फर्किएको जहाज सकुशल ल्याण्ड भएको छ। दुई घण्टादेखि काठमाडौंको आकाशमा होल्ड भएको जहाज सकुशल ल्याण्ड भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएकाे छ। जहाज विराटनगरमा ल्याण्ड हुन नसकेर काठमाडौं फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाइअलर्ट गरिएको थियो। विमान फोर्स ल्याण्डका लागि एम्बुलेन्स दमकल विमानस्थलमा राखिएको थियो। […]
September 27, 2021 adminLeaveaComment on मानिसहरु आत्तिएर रुन थालेपछि झन् गाह्रो भयो, हामी यहिँवाट हा’मफा’ल्छौं भनेर आग्रह पनि गर्यौ : बुद्ध एयरको विमानका यात्रु
काठमाडौ । सोमबार काठमाडौंबाट विराटनगर जान बुद्ध एयरको विमान चढ्दा यात्रुले उनीहरुको जिवनमा के हुनसक्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । जब जहाज विराटनगर पुग्यो अवतरण गर्ने क्रममा ल्याण्डिग गियरले काम नगरेपछि अवतरण हुन सकेन । विमान चालकले विराटनगरकै आकासमा धेरै पटक फन्को लगायो । तर पनि चक्का खुलेन । विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि […]
September 27, 2021 adminLeaveaComment on ल्यान्डिङ गियरमा संकेत नदेखेपछि विमान काठमाडौं फर्काउने निधो गरे : विमानका क्याप्टेन एजी शेर्पा
September 27, 2021 adminLeaveaComment on यिनै हुन् बुद्ध एयरको जहाजलाई ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाएर ७७ जनाको ज्यान बचाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पा
कसरी बन्छ पो,र्न फिल्म ? यस्ता छन् रोमाञ्चकारी तथ्यहरू
September 27, 2021 adminLeaveaComment on कसरी बन्छ पो,र्न फिल्म ? यस्ता छन् रोमाञ्चकारी तथ्यहरू
व,यस्क चलचित्र दुनियामा धेरै मानिसले हेर्छन् तर व,यस्क चलचित्रभित्रको संसार कस्तो हुन्छ ? यो कसरि सुट गर्छन भन्ने कुरा कमै मानिसलाई मात्र थाहा छ। हालै केहि पो,र्नस्टार र निर्माताहरुले पोर्न फिल्मभित्रका धरै रोमाञ्चकारी तथ्यहरु उजागर गरिदिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल रेडिटमा प्रयोगकर्तालाई जवाफ दिने क्रममा उनीहरुले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। यसमा टिप्पणी गर्ने एकजनाले सोधेका थिए, […]